Ọ́bá Akwụkwọ Ọdịnaya: Gịnị ka ọ bụ? Na ihe kpatara Ọdịnaya Mgbasa Ozi Gị Na-adaghị Na-enweghị Ya | Martech Zone
Ọ́bá Akwụkwọ Ọdịnaya: Gịnị ka ọ bụ? Na Ihe Mere Ọdịnaya Mgbasa Ozi Gị Na-adaghị Na-enweghị Ya
Ọtụtụ afọ gara aga, anyị na ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ nde ederede bipụtara na saịtị ha. Nsogbu bụ na ọ bụ naanị ole na ole ka a gụrụ, ma ọ bụ obere akara na injin ọchụchọ, ihe na-erughị otu pasent n'ime ha nwere ego ha nwetara.
Aga m ama gị aka inyocha ọba akwụkwọ nke ọdịnaya gị. Ekwenyere m na ọ ga - eju gị anya na pasent ole nke ibe gị bụ ndị ndị na-ege gị ntị na-ewu ewu ma na-arụ, ọ bụghị ịkọwa peeji nke ibe dị na injin ọchụchọ. Anyị na-ahụkarị na ndị ahịa ọhụụ anyị na-akwado naanị usoro akara, ma jiri ọtụtụ puku awa na ọdịnaya nke ọ nweghị onye na-agụ.
Ndị ahịa a nwere ndị ọrụ ederede na ndị editọ na ndị ode akwụkwọ… mana ha enweghị atụmatụ etiti Kedu dee. Nanị ihe ha dere bụ banyere isiokwu ndị masịrị ha na ha. Anyị nyochara ọdịnaya ha ma chọpụta ụfọdụ nsogbu… anyị hụrụ ọtụtụ isiokwu sitere na isiokwu dị iche iche n'otu isiokwu ahụ. Mgbe ahụ, anyị hụrụ ọtụtụ isiokwu na-enweghị ọkwa, enweghị njikọ aka, na edeghị nke ọma. Ọbụna ha nwere ọtụtụ ihe dị mgbagwoju anya otú na- isiokwu ndị na-enweghịdị foto gụnyere.
Anyị ekwughị ozugbo azịza ya. Anyị jụrụ ha ma anyị nwere ike ịme mmemme pilot ebe anyị tinyere 20% nke akụrụngwa akụkọ ha iji melite ma jikọta ọdịnaya dị ugbu a karịa ịde ederede ọhụrụ.
Ihe mgbaru ọsọ bụ ịkọwapụta a Ọbá akwụkwọ ọdịnaya - ma nwee otu isiokwu zuru ezu zuru ezu na isiokwu ọ bụla. Ọ bụ ụlọ ọrụ mba, yabụ anyị nyochara isiokwu ahụ dabere na ndị na-ege ha ntị, ọkwa ọchụchọ ha, oge, ọnọdụ, na ndị asọmpi ha. Anyị nyere ndepụta akọwapụtara nke ọdịnaya, ahaziri kwa ọnwa, nke e butere na nyocha anyị.
Ọ rụrụ ọrụ dị ka amara. Ihe ntinye nke 20% anyị tinyere iji wuo ọbá akwụkwọ ọdịnaya zuru oke karịrị 80% nke ọdịnaya ndị ọzọ emepụtara n'ụzọ na-enweghị isi.
Ngalaba ọdịnaya gbanwere:
Ego ole ka anyị ga-ewepụta kwa izu iji nweta ebumnuche arụpụta ihe?
Kedu ọdịnaya anyị kwesịrị ịkwalite ma jikọta na-esote iji nweghachi nlọghachi na ntinye ọdịnaya?
Ọ dịrịghị m mfe. Ọbụna anyị wuru nnukwu injin nyocha data iji chọpụta usoro edoziri nke usoro ọdịnaya iji hụ na anyị na-enweta ROI kacha mma na ọdịnaya ọdịnaya. Edebere ibe ọ bụla site na isiokwu, isiokwu isiokwu, geography (ma ọ bụrụ na ezubere ya), na taxonomy. Mgbe ahụ, anyị chọpụtara ọdịnaya nke họọrọ na asọmpi - mana emeghị nke ọma.
N'ụzọ na-akpali mmasị, ndị edemede na ndị editọ hụkwara ya n'anya. E nyere ha isiokwu, ọdịnaya dị ugbu a nke a ga-ebugharị gaa na isiokwu ọhụrụ ọhụụ, yana ọdịnaya na-asọmpi sitere na weebụ. O nyere ha nyocha niile ha chọrọ iji dee ederede ka mma, nke miri emi.
Ihe Mere I Kwesịrị Isi Wulite Ọdịnaya Ọdịnaya
Nke a bụ obere vidiyo mmeghe banyere ihe ọbá akwụkwọ ọdịnaya bụ yana ihe kpatara usoro ịre ahịa ọdịnaya ga-eji tinye usoro a.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-anakọta isiokwu na isiokwu ndị yiri ya na oge, mana onye ọbịa na saịtị gị agaghị pịa ma pịa maka ịchọta ozi ha chọrọ. Ọ dị oke mkpa ka ijikọọ isiokwu ndị a n'otu, nke zuru ezu, nke a haziri nke ọma nwe- edemede na isi okwu obula.
Otu esi akowaputa akwukwo ihe di n'ime gi
Maka ngwaahịa ma ọ bụ aka ọrụ gị, atụmatụ ọdịnaya gị kwesịrị itinye aka na ọkwa nke ọ bụla njem ozu ahia:
Nchoputa Nsogbu - Inyere ndị na-azụ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa aka ịghọta nsogbu ha nke ọma na ya niile yana mgbu ọ na-akpatara gị, ezinụlọ gị, ma ọ bụ azụmahịa gị.
Nchọpụta Ngwọta - Inyere onye n’azu ahia ma obu azumazu aka ighuta ka esi egbo nsogbu a. Site na vidiyo 'otu-esi' site na ngwaahịa ma obu oru.
Chọrọ Building - inyere ndị na-azụ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa aka ịghọta etu esi enyocha azịza ọ bụla iji ghọta ihe kacha mma maka ha. Nke a bụ nnukwu oge ị ga - esi gosipụta ọdịiche gị.
Nhọrọ Ndị Na-enye Aka - Inyere onye n’azu ahia ma obu azuma ahia aka ighota ihe kpatara ha gha eji ahoro gi, ahia gi, ma obu ahia gi. Nke a bụ ebe ịchọrọ ịkekọrịta ahụmịhe gị, asambodo, njirimara nke atọ, nkwupụta ndị ahịa, wdg.
Maka azụmaahịa, ị nwekwara ike inyere onye na-eme nnyocha aka ịghọta ka ọ ga-esi kwado asọmpi gị ọ bụla ma debe gị n'ihu ndị otu ha ka ha wee nwee nkwekọrịta.
ngalaba haziri nke ọma ma dịkwa mfe ngosipute site na isiokwu nta rue na isiokwu nta.
Research site na isi na nke abụọ iji nye ntụkwasị obi na ọdịnaya gị.
Ndepụta ndepụta a kọwara isi ihe nke isiokwu ahụ n'ụzọ doro anya.
Imagery. Onye nnochite anya thumbnail maka ịkekọrịta, eserese, na foto ebe ọ bụla enwere ike na isiokwu ahụ iji kọwaa ya nke ọma ma wuo nghọta. Micrographics na infographics dị mma.
Vidio na ọdịyo iji nye nnyocha ma ọ bụ nkọwa dị mkpirikpi nke ọdịnaya.
Na isoro onye ahia anyi aru, a ịgụta ọnụ abụghị ihe mgbaru ọsọ kasịnụ, isiokwu ndị a sitere na narị ole na ole ruo puku okwu ole na ole. Ochie, mkpụmkpụ, a na-agụghị akwụkwọ ka a tụbara wee bufee ya na isiokwu ọhụrụ, nke bara ọgaranya.
Backlinko nyochara ihe karịrị 1 nde nsonaazụ wee chọpụta nkezi # 1 ogo peeji nwere okwu 1,890
Ihe omuma a kwadoro ihe omuma anyi na ihe anyi choputara. Agbanwewo kpamkpam otu anyị si ele ụlọ ọrụ atụmatụ maka ndị ahịa anyị anya. Anyi agaghi eme otutu ihe nyocha na otutu ihe eji emeputa ihe omuma, ihe omuma na ihe ndi ozo. Anyị kpachaara anya chepụta a ọbá akwụkwọ maka ndị ahịa anyị, nyochaa ọdịnaya ha ugbu a, ma dozie oghere ndị dị mkpa.
Ọbụna na Martech Zone, anyị na-eme nke a. M na-etu ọnụ banyere inwe ihe karịrị 10,000 posts. Ị ma nke mere? Anyị emeela blọọgụ ka ọ bụrụ ihe dị ka posts 5,000 ma gaa n'ihu ịlaghachi kwa izu ma mee ka okenye okenye. N'ihi na agbanweela ha nke ukwuu, anyị na-ebipụtakwa ha dịka ọhụrụ. Na mgbakwunye, n'ihi na ha na-ahakarị ma nwee backlinks na ha, ha na-arị elu na nsonaazụ ọchụchọ engine.
Ibido iji Usoro Ọdịnaya Ọdịnaya Gị
Iji malite, m ga-akwado ịme usoro a:
Kedu ihe bụ atụmanya na ndị ahịa na-enyocha n'ịntanetị banyere ọkwa nke ọ bụla na njem onye na-azụ ahịa nke ga - eduga ha na gị ma ọ bụ ndị asọmpi gị?
Kedu ndị na-ajụ ase ị ga-etinye? Edemede, eserese, mpempe akwụkwọ, akwụkwọ ọcha, ihe ọmụmụ, nleba anya, vidiyo, pọdkastị, wdg.
Kedu ugbu a ọdịnaya ị nwere na saịtị gị?
Kedu research ị nwere ike itinye n'ime isiokwu ahụ iji wusie ike ma dezie ọdịnaya ya?
Na ọkwa ọ bụla na isiokwu ọ bụla, gịnị ka igwe nyocha ahụ ndị asọmpiisiokwu dị ka? Kedu ka ị ga - esi chepụta karịa?
Na-ede banyere ịụlọ ọrụ r kwa izu agaghị arụ ọrụ. Ga-ede banyere atụmanya gị na ndị ahịa gị. Ọbịa achọghị ịbụ rere; ha chọrọ ime nyocha ma nweta enyemaka. Ọ bụrụ na m na-ere ahịa ikpo okwu, ọ bụghị naanị ihe anyị nwere ike ịrụzu ma ọ bụ ihe ndị ahịa anyị na-arụ site na iji ngwanrọ. Ọ bụ otu m si gbanwee ọrụ nke onye ahịa m na azụmaahịa ha rụworo.
Inyere ndị ahịa gị na atụmanya gị bụ ihe na - eme ka ndị na - ege gị ntị mara nka na ikike na ụlọ ọrụ ahụ. Ọ nwere ike ọ bụghị naanị etu ngwaahịa na ọrụ gị siri enyere ndị ahịa gị aka. Nwedịrị ike itinye ihe gbasara ụkpụrụ, ọrụ, njikọta, na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ isiokwu ọ bụla ị na-agba mgba na ọrụ.
Etu esi enyocha isiokwu Isiokwu Ọdịnaya Gị
M na-amalite mgbe niile site na nyocha nyocha atọ maka ọdịnaya m mepụtara:
Nchọpụta ihe sitere na Semrush iji chọpụta isiokwu na isiokwu ndị achọsiri ike na isiokwu metụtara atụmanya m chọrọ ịdọrọ. Debe ndepụta nke isiokwu dị oke aka, yana! Gha acho iji ihe ederede gi gha eme ka ha di nma kari ha.
Nnyocha mmekọrịta mmadụ na BuzzSumo. BuzzSumo na-egwu ugboro ole a na-akọrọ isiokwu. Ọ bụrụ n'inwere ike ịmekọrịta ewu ewu, okekọrịta, ma dee ederede kacha mma na isiokwu a - ohere ị nwere iji mepụta njikọ na ntinye ego dị elu. BuzzSumo dere ederede buru ibu n'oge na-adịbeghị anya banyere otu esi eji ya Nyocha ọdịnaya.
Izu nyocha taxonomy iji hụ na edemede gị kpuchiri isiokwu niile metụtara isiokwu. Lelee Zaa Ọha maka ụfọdụ ịtụnanya nnyocha na taxonomy nke isiokwu.
Mee mpempe akwụkwọ dị ukwuu nke isiokwu ndị a, butere ha ụzọ site na ihe dị mkpa, wee malite ịchọ saịtị gị. Have nwere ọdịnaya emetụtara isiokwu ahụ? Have nwere ọdịnaya nke ruru ogo maka isiokwu ndị metụtara ya? Ọ bụrụ na enwere ike ịkwalite ya - degharịa ederede ndị bara ọgaranya, zuru ezu. Meezie ọdịnaya nke na-enyere atụmanya gị aka na ndị ahịa gị ọzọ.
Wepụta kalenda ọdịnaya gị na ihe ndị ka mkpa. Aga m akwado ịkewaa oge n'etiti imelite ochie na ide ihe ọhụrụ ruo mgbe ọbá akwụkwọ gị zuru ezu. Na ekele na-agbanwe agbanwe azụmahịa gburugburu, technology ọganihu, na mpi - e nwere bụ mgbe niile ọhụrụ isiokwu ịgbakwunye gị n'ọbá akwụkwọ.
Ka ị na-ejikọ edemede ndị ochie ka ọ bụrụ isiokwu ọhụrụ, nke zuru ezu karị, jide n'aka na ị ga-eji redireeji dochie ederede ochie. M na-enyochakarị otú isiokwu ọ bụla si dị elu wee jiri nke kachasị mma permalink maka isiokwu ọhụrụ ahụ. Mgbe m mere nke a, injin nchọ na-abịakarị ma bulie ya elu karịa. Mgbe ahụ, mgbe ọ na-ewu ewu, ọ na-arị elu n'ọkwá.
Ahụmịhe Ọdịnaya Gị
Chee echiche banyere edemede gị ka onye na-anya ụgbọelu ga-abata maka ọdịda. Onye ọkwọ ụgbọ elu ahụ anaghị elekwasị anya na ala… ọ na-ebu ụzọ na-achọ akara ala, na-agbadata, na-elekwasị anya na ya ruo mgbe ụgbọelu ahụ metụrụ aka.
Ndi mmadu adighi agu akwukwo ederede maka okwu, ha Doppler ya. Ga-achọ iji isi okwu, nkwuwa okwu, mesiri ike, ngọngọ ngọngọ, onyonyo, na isi okwu ọma. Nke a ga - eme ka anya ndị na - agụ akwụkwọ lelee ma lekwasị anya. Ọ bụrụ na ọ bụ akụkọ toro ogologo, ị nwedịrị ike ịmalite ya na tebụl nke ọdịnaya dị na mkpado arịlịka ebe onye ọrụ nwere ike pịa ma gbagoo na ngalaba na-amasị ha.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ inwe ọba akwụkwọ kacha mma, peeji gị ga-eju anya. Onye obula kwesiri inwe ihe omuma di nkpa iji metuta onye obia ma nye ha ihe omuma ha choro. Ọ ghaziri ịhazi nke ọma, ọkachamara, nwee ahụmịhe ọrụ pụrụ iche ma e jiri ya tụnyere ndị asọmpi gị:
Echefula oku ị na-eme
Ọdịnaya abaghị uru belụsọ na ịchọrọ ka mmadụ mee ihe na ya! Jide n'aka na ị ga-eme ka ndị na - agụ akwụkwọ gị mata ihe na - esote, ihe omume ị ga - abịa, otu ha ga - esi hazie oge ị ga - aga, wdg.
Tags: backlinkoỌbá akwụkwọ ọdịnayacontent Marketingusoro ahia ahiammepụta ọdịnayagoogle ogoole okwu ole blog kwesiri ibuọbá akwụkwọresearchsemrushokwu ọnụ
Moosend: Atụmatụ Ahịa Azụmaahịa niile Iji Wulite, Nwale, Sochie, ma Too azụmaahịa gị
Ahịa Ọgbọ: Otu Ọgbọ Ọ bụla Si Adaba Na Nweta Teknụzụ